I-oksijeni ye-cocktail-foam emoyeni, eyakhiwa esuka kwi-phytophoresis, ijusi okanye ezinye iziphuzo. I-foam enjalo igcwele umoya ococekileyo. Okwangoku, i-oxygen cocktails iye yafumana ukuthandwa, kuba ukusetyenziswa kwabo kuyindlela elula kunye nekhawulezayo yokubonelela umzimba nge-oxygen inkxaso. Isiseko se-cocktail cocktails sivame ukuhlanganiswa okuhlanganisiweyo apho ungalungisa khona i-milkshake okanye i-juice yezithelo. I-oksijeni iqhubekile njenge-oxidizer, ikhulisa inkcazo yesiseko, ngoko i-foam inikwe i-taste of fruit fresh.
Yintoni ebandakanyiweyo kwi-cocktail cocktail
Le cocktail iqukethe i-phyto-cocktail kunye ne-cocktail ene-foam, i-oxygen bubbles. Icandelo le-phyto-cocktail lingaba li-vitamin, kwaye lingaba lonyango. Maxa wambi ama-flavour angafakwa. Njengento eyenza i-foam, ingcambu ye-licorice, amaqanda, ukunyuswa kwe-gelatin kusetyenziswa. Ezi zinto zingatshintshana, kwaye zidibaniswe. Ininzi idla ngokusetyenziswa kweengcambu ze-licorice okanye iprotheni yeqanda elomileyo. Ekulungiseleleni i-cocktail, iprotheni yendalo yeqanda ayisetyenziswanga, ngenxa yokusulelwa kwintsholongwane ye-salmonella kunye ne-shelf encinci ye-cocktail, ephuma kumzuzu wokulungiselela iintsuku ezimbini kuphela. Ukulungiselela i-gelatin kuthatha malunga neeyure ezintandathu.
Yintoni ekusebenziseni i-cocktail cocktail?
I-oksijeni ngokusebenzisa izicubu zingena emzimbeni kakhulu kunemiphunga, kwaye i-cocktail iyadla ngaphakathi kule nzuzo yayo, ekubeni i-oksijini ingena emzimbeni kwimiphunga. Inxalenye yale cocktail ifaniswa nokuhamba ehlathini. Ngaloo ndlela, i-cocktail iyanceda umzimba nge-oxygen ecocekileyo, ukukhusela i-oksijini yindlala okanye i-hypoxia, ukujamelana nokusila nokubonakalisa ukukhathala okungapheliyo. Bancedisa umzimba ukuba ubhekane neemeko ezixinzelelekileyo, kuba iingqondo zibhekwa njengesondlo esihle, ngaphezu koko, ziyakwazi ukubuyisela imisebenzi yazo emva kwemithwalo yengqondo ende.
Ngaphezu koko, i-cocktail efanayo inokubuyisela i-microflora yamathumbu, ngoko kuphucula inkqubo yokugaya inyama, ukukhawulezisa inkqubo yokwahlukana kwamacandelo ancedo. I-cocktail iyiluncedo kwaye ithathwa njengomncedisi omhle ekhatheni izifo zamathumbu nesisu.
Kwakhona, ezo nkcazo zinegalelo ekwenzeni unyango lwe-CNS olusebenzayo ngenxa yongcinezelo lwangokwemvelo, ukuxilonga, ukuxhatshazwa ngokomzwelo, uxinzelelo lwegazi, isifo senhliziyo, i-cholecystitis, i-hepatitis engapheliyo, uxinzelelo. Ukuba usebenzisa i-oxygen cocktail nsuku zonke, unokwandisa ukusebenza kakuhle kunye nokukhuseleka.
Ukusela i-oksijeni cocktail kunconywa ngokukhethekileyo kulabo abakholisa impilo kunye nabasetyhini abathwele umntwana (ukuze kuphuculwe iimeko zokuphuhliswa komntwana).
Ukuba i-cocktail inikwa abantwana besikolo, kuya kuba lula ukuba umntwana afunde ikharityhulam yekharityhulam aze enze umsebenzi wesikolo. Ngaphezu koko, ukhuseleko lomntwana luya kuqiniswa kwaye lukhuselwe kwiintsholongwane ngexesha le-ARV kunye nomkhuhlane, oko kukuthi, ngexesha lokubanda.
Ukusetyenziswa kwansuku zonke ze-oxygen cocktail kuvuselela kwaye kuhlambulule isikhumba, ngenxa yokuba iiseli zesikhumba kunye nethungelwano lwe-capillary zigcwele umoya-mpilo.
I-okgeni cocktail inokukwazi ukunciphisa umva wokuba ulambile (eqinisweni isisu sigcwele isiselo, apho kukho cishe akukho khalori) kunye nokuphucula imetabolism. Abantu abafuna ukulahlekelwa amakhilogremu ambalwa, bahlambulule umzimba, ngokubambisana kunye nokutya okuncinci khalori kunconywa ukusela i-cocktail cocktail. Iintsuku eziliqela zokuzila ukutya zingafaniswa neentsuku ezisixhenxe zokuzila ngokuqhelekileyo.
Ukuphuza i-cocktail eyanconywa ngabo bahlala beya kwi-gym nangemva kokukhathala emva kokuzikhandla. I-cocktail iya kugcwalisa ukubonelelwa kwe-oksijeni ecocekileyo, inciphise umva wokukhathala.
Ukuqhubela phambili umsebenzi oqhelekileyo womzimba, i-oxygen i-cocktail yomntu omdala ucebise ukuba aphuze ekuseni ekhonzayo, ngokuhlwa kwamasebe amabini. Abantwana badinga ukusela i-oxygen cocktail ekuseni kunye nokuhlwa.
I-oxygen cocktail engeyonto iyenzeka, ngoko-ke, ungaziphiki (ukuba kunokwenzeka) kulungele ukusela isabelo esilungileyo siselo.
Indlela yokutya ngokufanelekileyo imihla ngemihla?
Abangcamli kunye ne-sweeteners-ingozi okanye inzuzo
Imveliso edala isikhumba
Ziyingozi kwimpilo ekudleni
Isondlo somama ngexesha lokutya
Iviniga yebhasamu: ukupheka, okulungileyo, ukutya
Icoleta, umphumo ongekho emzimbeni
Iintlungu ezinzima ngokuncelisa
Inkokeli yabesifazane: ukukhokela njengendoda?
Indlela yokulwa neentloni kunye nokuyeka ukuxhamla
U-Yulia Snigir noPaulina Andreeva bavele ekuvuleni kwe-MIFF-2016 yedwa, ifoto
Patties nge jam
Isaladi evela kubhontshisi weesanhlamvu
Indlela yokuphila xa kungekho nentsingiselo ebomini?
Kwiengozi zokutshaya kubafundi besikolo
Kutheni umntwana kufuneka alale ngokwahlukileyo kubazali
I-Potato casserole ngamakhowe
I-Chill: iresiphi ngefoto-nge-nyathelo. Iidlophu zokubanda ezikhungweni ezivela emilenzeni yengulube, inyama yenkomo, inkukhu, kunye ne-gelatin kwi-multivark
I-Pasta ene sipinashi, i-broccoli kunye neepasta ezihlaza